Proverbe 1883 Entam-panjozoro : bataina , tsy zakan’ irery ; aiditra , tsy omby varavarana ; ataina , tsy mahaloaka alina. [Cousins 1871 #871, Nicol 1935]
Proverbe 1885 entan- -draty roa fehy : aiditra atosik' efa-dahy ; ataina , tsy mahaloaka alina . [Veyrières 1913 #5898, Cousins 1871 #872]